उज्यालो बलिउड भित्रको अँध्यारो पाटो र सुशान्त सिंहको मृत्युको रहस्य | पहिलो बोली
उज्यालो बलिउड भित्रको अँध्यारो पाटो र सुशान्त सिंहको मृत्युको रहस्य
१५४६३ पटक पढिएको
मायानगरी बम्बई/मुम्बई एउटा सपनाको सहर हो जहाँ भारत मात्र नभई नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत थुप्रै देशहरु बाट मानिसहरु आफ्नो करिअर बनाउन जान्छन्। बलिउडमा स्थापित हुनको लागि, रुप मात्र राम्रो भएर हुदैन , उत्तिकै ट्यालेन्ट हुनु पनि जरुरत हुन्छ। कतिपयले सहि अवसर सही समयमा पाउंछन्, कतिलाई अवसर हुंदा पनि,समयले साथ दिंदैन। अर्थात् उनीहरु बिस्तारै बलिउडबाटनै अस्ताउंछन।
बलिउडमा नाताबाद र कृपाबाद हावी भएकै कारणले गर्दा धेरै राम्रा राम्रा कलाकारहरुले बलिउडबाट नै हात धुनुपरेको छ।थेगो नै छ ,मान्छे मरे पछि मात्र उसको गुडगान गाइन्छ । तर यो वास्तब मा यथार्थपरक छ।भर्खरै भएको सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या र मान्छेहरुले उनीप्रति गरेको प्रतिक्रिया नै उक्त थेगोको ज्वलन्त उदाहरण बन्न गएको छ। राजपुतको आत्महत्यालाइ लिएर विभिन्न व्यक्तिहरु , सामाजिक संजाल तथा अनेक संचार माध्यममा थरिथरिका टिका टिप्पणीहरु आएका छन्।मान्छे को जात,सामान्य व्यक्तिको मृत्युले त एउटा गाउँ, टोल नै सोकाकुल हुन्छ भने , बलिउडमा काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले हलचल पैदा नहुने कुरै भएन।
कुरा गरौँ, बलिउडका जानेमाने हस्तीहरुको। शाहरुख खान ,सलमान खान , अमिर खान,प्रियंका चोपरा अक्षय कुमार। कोइ भन्लान, ठुला कलाकारहरु ले गर्दा नै बलिउड धानिएको छ। तर यो पूर्ण रुपमा विरोधाभास छ। बलिउड जानेमाने हस्तीहरुले गर्दा मात्र नभई अनेकौं सुशान्त सिंह जस्ता होनहार तर प्रस्फुटित हुन नसकेका कलाकारहरुले गर्दा धानीइ राखेको छ तर जस सबै ठुलालाइ मात्र जाने गर्दछ। नाताबाद को कारण ले मात्र नभई बलिउडमा त्यस्ता कलाकार सयौं छन् जो आफ्नो मेहेनत र परिश्रम बाट आफ्नो करिअर स्थापित गर्न तल्लिन छन् ,आफ्नो क्षमता प्रस्फुटित गर्न रातदिन नभनी काम गरिराखेका छन्।
तर बिडम्बना त के छ भने ,जसको बाबु निर्देशक छ, जसको बाबु अभिनेता छ, तिनीहरुकै सन्तानहरुको हाईहाइ हुन्छ , हाईहाई हुने बनाइन्छ र जो संघर्ष र दिनरात मेहेनत गरेर आएको छ , उसको कोहि पनि हुदैन।न त उनीहरुका फिल्महरु समयमा रिलिज हुन्छन्, न त उनीहरुले अभिनय गरेका चलचित्रहरुले कुनै अवार्ड नै जित्दछन्।तत्पश्चात,उनीहरुमा अनेकौं कुरा हरु उब्जिन्छन्। कोहि ले डटेर लड्ने आँट राख्दछन्,कोहि आफ्नो फिल्मी करिअर लाइ नै लत्याएर अरु पेशा गर्न बाध्य हुन्छन् भने कोहि सहनै नसकी आफ्नो प्राणनै त्याग गरिदिन्छन्।
बलिउडमा नाताबाद र कृपाबाद , आजको चलन हुदै होइन ,यो दशकौं देखि चल्दै आएको चलन नै हो। तर बलिउड चलेकै छ।अर्कातिर एउटा फिल्मको अभिनयका लागि आफ्नो वदन नै बन्दगी राखेर अभिनय शुरु गरेर उभो लाग्नेहरु पनि नभएका हैनन् , यस्ता समाचारहरु हामी प्राय सुन्दै आइराखेका छौँ, देख्दै आइराखेका छौं । कसैलाइ त्यस्तो गर्न मन लाग्दैन र उनीहरु फिल्ममा ‘भूमिका दिन्छु’ भनेर झुक्याउनेहरुका बिरुद्द बोल्दछन् , आवाज उठाउंछन् ।
त्यसपछि उनीहरुको दिनगन्ती नै शुरु हुन्छ। यस्तै बाध्यताको फाईदा उठाउन खोज्नेहरुको बिरुद्दमा बोल्न एकताका ‘मि टु’ ले ठुलै तहल्का पिटेको थियो ।
के बलिउड ”नाताबाद” बाट ग्रसित नै भएको छ त ?
छ ,पक्कै छ। उदाहरणकै लागि अभिषेक बच्चन ,अलिया भट्ट ,रणबिर सिंह ,सोनम कपुर ,टाइगर स्रफ,बरुण धवन इत्यादी। यिनीहरु बलिउडमा ”स्टार किड” ले चिनिन्छन्।कुनैमा भने आफ्नै खुबी पनि नभएको होइन तर यिनीहरुलाइ बलिउडमा भूमिका पाउन कुनै पापड बेल्नु नै परेन। ।मतलब अरुलाई ५ वर्ष लाग्ने काम यिनीहरुलाइ १ बर्ष पनि लाग्दैन,लागेन पनि। यिनीहरुले अभिनय गरेका चलचित्रहरु राम्रा नभएपानी प्राय: ”हिट” नै हुन्छन्। यिनीहरुले अभिनय गरेका फिल्म रिलिज अरु संग जुध्यो भने ,उनीहरुका फिल्म नै चल्दैनन् वा चल्न दिईंदैन।
अब कुरा गरौँ, आफ्नै क्षमताले गर्दा स्थापित कलाकारहरुको।आफ्नै बलबुतोले स्थापित अभिनेताहरु मध्य एक अयुश्मान खुराना भन्छन,”मेरो डेब्यु चलचित्र रिलिज हुंदा मा २७ बर्षको थिएँ। यदि म स्टार किड हुन्थे भने ,म २२ बर्षको हुदा नै यो सम्भव हुने थियो। तर म २७ वर्षमा परिपक्व भएर आएँ।”त्यस्तै अभिनेत्री कंगना रनावत ले पनि यो नाताबाद को खुलेर बिरोध गर्दै आएकी छन्। उनले करन जोहरकै रियालिटी टिभी शो ”कफी विद करन” मै उनलाई ”नाताबाद को झन्डाबाहक” भनेकी छन्।
त्यस्तै उनले अनुपम खेरको एउटा टिभी शो मा भनेकी छन् ,”के ति स्टार किडहरुलाई थाहा छ बलिउडमा फेम बनाउन र क्रिटिक्स पाउन १० बर्ष लाग्छ भनेर। ”त्यस्तै अर्की ”आउटसाइडर” कृति सनोनले ‘पिङ्कभिल्ला’ संगको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छन् ,”यदि म फिल्मी परिवारबाट हुन्थें भने मलाई , निर्देशक खोज्दै हिड्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन। ”सिद्धान्त चतुर्वेदी , तपसी पन्नु ले पनि बलिउडको यो रोगको खुलेर बिरोध गर्ने गरेका छन्। अभिनेता गोविन्दले पनि नाताबाद ले आफु मर्का मा परिरहेको भनेर अन्तरबार्ता दिएका छन्। उनले एउटा अन्तरबार्तामा भनेका छन्,मलाई पनि सुशान्त लाइ जस्तै यो रंगमंच बाट उठाएर फ्याकिएको थियो। मेरा फिल्महरु पनि समयमा रिलिज हुन दिईंदैनथ्यो। उनले भनेका छन् ,”मलाइ अवसर त दिनुहोस , मलाई मंच त दिनुहोस ”यस्तो मैले के गल्ति गरें,मैले यो बुझ्न सकिरहेको छैन।म कडा मेहनत गर्दै आइरहेको छु , र म संघर्ष गर्नबाट पछि हट्दिन। ”
तर अहिलेसम्म नाताबाद को बारेमा बोलेर पनि नसुनिने अवस्था थियो भने, अहिले नाताबाद ले गर्दा नै सुशान्त सिंह ले आफ्नो देह त्याग गरे भनेर ठोकुवा गरेर नै यसको खुलेर बिरोध गर्नेहरु, माथि उल्लेख गरिएका कलाकार मात्र नभई आम सर्बसाधारणहरुले पनि यसको घोर बिरोध गरेका छन्। अधिकांशले नाइके करन जोहर नै भएको मान्दछन्।सायद यिनै दबाबले हुन सक्छ , उनले पहिला ‘फलो’ गरेका ८०० ट्वीटर खाता मध्ये सबै लाइ अन्फलो गरि केवल ८ जनालाई मात्र फलो गरेका छन्। यसो गर्नु भनेको पक्कै पनि कहिँ न कहिँ उनले ‘कुरा बुझ्नु’ हो।
सुशान्तको मानशिक स्थिति
सुशांतको आत्महत्याका कारणहरू बुझ्नको लागि उसको मानसिक अवस्था बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।आत्महत्या साधारण चिज पक्कै पनि होइन, यो त केवल दिनानुदिन भैरहेका आफु माथिका बज्रपातहरुको अन्तिम नतिजा हो। मानसिक अवस्था एकदमै बिचलित भएकाहरुले मात्र एस्तो क्रुर कदम चाल्दछन्। सुशांत सिंह राजपूतको यो इन्स्टाग्राम पोस्टमा हेर्नुहोस्। यसमा सुशान्तले एउटा विशेष शब्द ‘Panpsychism’ प्रयोग गरेका छन्। जुन दार्शनिक विचारधाराको विशेष अवधारणा हो। यसमा, मानिसले संसारको हरेक सृष्टिमा परमेश्वरलाई देख्दछ र अन्तमा यसमा मिश्रण हुने झुकाव हुन्छ। यस विचारलाइ गहिरो संग विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा आफ्नो भौतिक अस्तिस्त्व मेटाउने इच्छा प्रकट हुन्छ। सुशांतले यो पोस्ट २ अप्रिलमा लेखेका थिए। जसमा उनी Panpsychism को जिकिर गर्दैछन्।
What if consciousness is not something special that the brain does but is insteadaquality inherent to all matter in the universe? It isatheory known as “#panpsychism” and it is one interesting perspective indeed, for both science enthusiasts and spiritual alike. Try Philip goff’s Galileo’s error for more on it:) #consciousness #fabricofreality #panpsychism
यस्तै उनले मे २६ अर्थात् आत्महत्या गर्नुभन्दा २० दिन पहिले अर्को इन्स्टाग्राम पोस्ट गरेका छन् । यसमा पनि सुशान्तको मानसिक अवस्था कस्तो थियो त भन्ने झल्किएको छ । यो पोस्टमा सुशांत सिंह राजपूतले बौद्ध धर्ममा व्याप्त अवतारको सूत्रलाई जनाउंदै छन् । यो बौद्ध धर्ममा प्रचलित महायान शाखाको एक धेरै लोकप्रिय सूत्र हो। यो अवतारात्मक सूत्रमा भनिएको छ कि ठूलो ईश्वरीय चेतना मानव शरीरको भित्र रहन्छ। सुशांत आफ्नो पोस्टमा वैज्ञानिक आईन्स्टाइनको सिद्धान्तसँग अवतारको सूत्र जोड्न कोशिश गरेका छन्। हुनसक्छ सुशान्तले आफ्नो शारीरिक रूपलाई त्याग्ने छनौट गरे, जुन ती स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएको ठूलो ईश्वरीय चेतना पूरा गर्न आत्महत्या गरे।
त्यस्तै ४ मे मा लेखिएको सुशांत सिंह राजपूतको अर्को पोस्टले पनि उनीमा पूर्ण निराशाको भाव झल्काउँछ। यसमा उनले लेख्छन् कि ”अन्धकार उर्जा”, जुन ब्रह्माण्डको ६८ प्रतिशतमा फैलिएको छ। उहाँ हाम्रो व्यवस्थित संसारको सृष्टिको कारण हुनुहुन्छ। सुशांतले ब्रह्माण्डका रहस्यहरू उल्लेख गरेका छन्। यो पोष्टले सुशांत भित्रको संघर्ष देखाउँदछ।
A post shared by Sushant Singh Rajput (@sushantsinghrajput) on May 4, 2020 at 7:40am PDT
जुन ३ मा उनले आखिरी पोस्ट आफ्नी आमा संगको सानो हुंदाको फोटो शेयर गरेका छन्। यो पोस्ट ले उनी आफ्नी आमालाइ पनी खुब ‘मिस’ गरिरहेको झल्किन्छ।
सुशान्त को मृत्युको केहि दिन अघि मात्र उनकी म्यानेजर दिशा सलियनको पनी मुम्बई को अग्लो भवनबाट खसेर मृत्यु भएको थियो।उनको यस्तो मृत्युवरण लाई पनी रहस्यमय तरिकाले हेरिएको छ। तर उनी पनि अग्लो भवनबाट हाम फाल्नुपर्ने स्थितिसम्म कसरी पुगिन् भन्ने कुरा को तथ्य बाहिर आइसकेको छैन।
के सुशान्त सिंह ‘बलिउड लबी ‘ को सिकार नै भएका थिए त ?
सुशान्तका एकदम नजिकका साथीहरुको बुझाईमा उनी बलिउड बाट पिडित नै थिए। बलिउडको एउटा झुण्ड नै उनलाई असफल बनाउनको लागि लागिनै परेको थियो। उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरु समयमा रिलिज हुन दिईंदैनथ्यो। त्यस्तै निर्माता करन जोहरले पनि उनका चलचित्रहरु हलमा प्रदर्शन गर्नुको सट्टा वेब सिरिज ‘नेटफ्लिक्स’मा गरेका थिए भन्ने खबर यत्रतात्र आइरहेका छन्।उता सुशान्तका परिवारजनहरुले पनि सुशान्त को आत्महत्या नभई हत्या नै भएको ठोकुवा गरेका छन्।
उनले अभिनय गरेका राम्रा चलचित्रहरुले कुनै पनि अवार्ड जित्न नसक्नुलाइ पनि बलिउडले उनीप्रति गरेको व्यवहार प्रस्ट झल्काउंछ। त्यस्तै शेखर कपुर द्वारा निर्देशित हुने भनिएको ‘पानी’ चलचित्र बाट पनि यशराज फिल्म्स निर्माणबाटै पछाडी हटेको पनि बताइएको छ। मुम्बई पुलिसले पनि यो आत्महत्या संग जोडिएका केहि व्यक्तिहरु मध्ये एक रिया चक्रबर्ती लाइ बान्द्रा पोलिस स्टेशनमा बोलाएर १० घण्टा भन्दा बढी सोधपुछ गरेको थियो। रिया चक्रबर्ती सुशान्तकी पुर्व प्रेमिका हुन्। त्यस्तै मुम्बई स्थित बान्द्रा पुलिसले यशराज फिल्म्सले सुशान्त संग गरेका सम्झौताहरुको ‘कपि’ झिकाएको छ।
यस्तै यस्तै भेदभाब भैराखेका कारणले नै सुशान्त सिंह राजपुत डिप्रेसनमा गई आत्महत्या गरे भनेर अड्कल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ।
अहिले सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युले जसरी सबैको आवाज बुलन्द भएको छ , नाताबाद र कृपाबाद बिरुद्ध जसरी बोलिएको छ ,त्यो आवाज त्यसरी नै गुन्जीईराख्नु पर्दछ ताकि कसैले पनि पक्क्षपात गर्नु भन्दा पहिला १० पटक सोच्न बाध्य होस्। सधै नराम्रा लाई मात्र अघि मौका नदिई राम्रालाइ पनी उनीहरुको क्षमता पहिचान गरि प्लेटफर्म दिईनु पर्दछ र भबिष्यका हजारौं क्षमतावान सुशान्त सिंह हरुलाइ मृत्युको मुख बाट जोगाउनु पर्दछ।
(नोट:यो लेखलाइ अरु कुनै साइटमा अनधीकृत रुपमा अपलोड गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारवाही गरिनेछ।)
यस्तो छ नेपालको संविधानमा विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था